Waraysiyada - VOA
Isniin 24 January 2022
Sidee ayuu Omicron uga duwan yahay Noocyadii hore ee COVID-19?
Cudurka COVID-19 oo ka mid ah cudurrada sida dhaqsiyaha leh ku faafa ayaa waxa la arkayey noocyo badan oo isbedbedala iyo magacyo ay dadku ku wareereen. Nooca cusub ee Omicron loo bixiyay ayaa hadda si weyn dunida ugu faafay...
Maxay Doonayaan Waalidiinta Ka Guura Dalalka Galbeedka? Q:3aad
Waxaan toddobaadkan marti ku ah Barnaamijka Qoyska Fartuun Abuukar Sankuus oo laba sano ka hor carruurteeda ka rartay Gobolka Kentucky ee dalka Mareykanka una guurtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, balse hadda dib ugu soo noqotay isla gobolkii ay 2 sano hor ka guurtay.
Maxay Doonayaan Waalidiinta Soomaalida ee ka Guura Dalalka Galbeedka? Q.2aad.
Waalidiinta Soomaalida ah ee ku nool waddamada Yurub, America, iyo Australia, ayaa qaarkood carruurta ula guura dalalka Africa iyo kuwa islaamka, iyagoo rajo ka qaba in ilmahooda ay u helaan barbaarin ku saleysan hab waafaqsan diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed.
Maxay Doonayaan Waalidiinta ka Guura Galbeedka?
Waalidiinta Soomaalida ah ee ku nool qurbaha, gaar ahaan waddamada Yurub, America, iyo Australia, ayaa qaarkood carruurta ula guura dalalka Africa iyo kuwa islaamka, iyagoo rajo ka qaba in ilmahooda ay u helaan barbarin ku saleysan hab waafaqsan diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida.
Walaaca Waalidiinta Maraykanka Ka Haysta Dib ugu noqoshada Iskuulada COVID-19 Dartiis.
Waxaa isa soo taraya walaaca waalidiin badan oo daggan dalka Maraykanka ay ka qabaan dib ugu noqoshada iskuulada ee sanad dugsiyeedka 2021-2022 kuwaasoo badankood furmaya toddobaadka soo aaddan (August 23, 2021).
Xisbiga Kulmiye oo ka jawaabay eedeyn loo jeediyay
Afhayeenka xisbiga Kulmiye ee Somaliland Cabdinaasir Muxumad Xasan (Buuni) ayaa ka jawaabay eedeymo ay Aamina Cilmi Fariid oo u tartantay kursiga baarlamaanka Somaliland ee gobolka Awdal ugu jeedisay Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska xisbiga KULMIYE .
Soomaali guulo ka gaaray doorashooyinka UK
Dalka Britain oo ka mid ah wadamada ay ku noolyihiin Soomaalida u badan dadka qurba joogta ah ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay doorashahadii golayaasha deegaanka ee dawladaha hoose. Soomaalida ayaa mudooyinkii ugu danbeeyey iska sharaxaysay baddiba xisbiyada siyaasada ee ku yaala dalkan Britain.
Maamulka Cusub ee Hirshabelle ayaa wajahaya caqabado uga imaanaya dhinaca gobolka Hiiraan, taasoo ay jiraan diidamo lagala hor yimid maamulkaas
Wareysi: Sheekh Maxamed Shaakir oo ka hadlay arrimo badan
Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo sheegtey inuu yahay madaxweynaha Galmudug, kana mid ah madaxda ururka Ahlu-Sunna ayaa ka hadlay sida iyo goorta ay kala boodeen dowladda federaalka oo ay markii hore heshiis ahaayeen iyo arrimo kale.
Safiirka Turkey ee Soomaaliya Mehmet Yılmaz oo wareysi siiyey VOA
VOA ayaa wareysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya la yeelatay safiirka Turkiga ee Soomaaliya, Mehmet Yılmaz, wuxuuna ka hadlayaa arrimo ay ka mid yihiin tababarrada ay siiyaan ciidanka Soomaaaliya, shaqada saldhiga milatari ee ay Muqdisho ku leeyihin iyo arrimo kale.
Doorashada Gobolka Iowa
Dadka daggan gobolka Iowa ayaa Isniintii smeyay xulashadoodii u horreeysay ee murashaxa xisbiga demoqraadiaga ee bisha Novembar doorashada xilka madaxweynaha kula tartamaya madaxweyne Donald Trump.